दुध खुवाउने महिलाहरुको लागि आहार
Q नमस्ते, म ४ जना छोराछोरी भएको ३१ वर्षकी महिला हुँ, चाडैँ सानो उमेरमा विवाह गरेको हुँ । मेरो ३ ओटा अपरेसन र १ ओटा सामान्य सुत्केरी भएको हो । धेरै छिटो तौल घटाउनु चाहन्छु, तर व्यायाम गर्ने र विशेष आहार खाने कुनै समय छैन । कृपया कुनै हर्बल औषधि बताइदिनुहोस्, जुन सधैँको लागि उपयोगी हुनेछ । मेरो तौल ६४ किलोग्राम छ...
यो तौल कम गर्ने कुरामा आउँदा त्यहाँ कुनै छिटोछरितो उपायहरू छैनन् । तपाईंले जुनसुकै औषधि लिएतापनि, तपाईं राम्रो तरिकाको सन्तुलित खाने योजना र नियमित व्यायाम तालिका बिना स्थायी रुपमा तौल घटाउनको लागि सम्भव छैन । तपाईंले जतिसक्दो चाडो यो बुझ्नुहुन्छ, तपाईंको लागि त्यतिनै राम्रो हो ।
Q म २२ वर्ष उमेर भएको कतरु प्रशान्त हुँ । हाल मैले मेरो टाउकोमा सेतो कपाल देखेको छु र म यसको कारण जान्न चाहन्छु ? यो समस्यालाई कसरी रोक्न सकिएला ? मलाई कुन भिटामिन वा प्रोटीनको कमजोरीको कारण यस्तो भएको हो र सुधारको लागि के खानु पर्ला भनेर बताइ दिनुहोस् ?
समयभन्दा पहिले भएको कपाल फुलेको सही कारणहरू थाहा भएको छैन । केही अध्ययनहरूले यो आनुवंशिकीको कारण हुन सक्दछ भनेर सुझाव भन्दछ । भिटामिन बी १२ वा थाइराइड विकारको कमीले पनि चाडैँ कपाल फुल्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थाहरुमा कारण पत्ता लगाएर थप उपचार गरि कपाल थप फुल्न रोक्न मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै कपाल फुल्न निको पार्ने वा नियन्त्रण गर्ने कुनै विशेष औषधि छैन । तपाईं सेतो कपाल लुकाउन धेरै थरिका कपाल रङ्गाउने उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।